Gịnị kpatara o ji ezo apịtị | Netwọk Mgbasa Ozi
La mmiri apịtị Ọ bụ ihe a na-ahụ anya gbasara ihu igwe nke ọ na-enweghị onye nwere mmasị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala gị n'okporo ụzọ. Ma, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ọ na-eme n’oge ọkọchị. Mana gịnị mere?
Elekwala anya na nlele. Chọpụta ihe kpatara mmiri ji apịtị.
1 Olee otú e si emepụta mmiri apịtị?
2 Ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe?
Olee otú e si emepụta mmiri apịtị?
Maka mmiri ozuzo iji weta apịtị dị mkpa na enwere iche thermal n’agbata ala na etiti na elu nke ikuku. Igwe dị elu, ịdị elu, ikuku ikuku yana uzuzu nwere ike iru ọkwa dị elu na troposphere. Mana ihe anaghị akwụsị ebe ahụ: ikuku a na-ekpo ọkụ ga-adaba na ihe dị jụụ ka o wee bulie elu karịa, nke ahụ ga-eme site na usoro ikuku dị na mpaghara ahụ.
Usoro usoro a na-ewepụ ikuku ọkụ, na-eme ka gradient na-arị elu na-abawanye. N'otu oge ahụ, ọsọ ifufe na-abawanye, na-eru ọbụna 160km / h. N'ime nke a, ọ na-ebu ya uzuzu ahụ nke kwụsịtụrụrịrị na ugwu ugwu North Africa. Site n'ime nke a, ha na-eme ka mbara igwe dị ka opal na agba. E kwesịghị iji oké ifufe mee ka ha nwee mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ájá ájá dịtụ ibu, karịa 100 microns.
Ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe?
Ọbụghị ncha ncha. N'ezie, na Canary Islands ha dịkarịsịrị, n'ihi na ha nọ nso na mpaghara Afrika. Na Iberia Peninsula na na Balearic Islands ha na-emepụta, ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ha anaghị etinye ihe egwu ahụike ọ bụla, ihe dị iche: ha na-ehichapụ ikuku nke uzuzu a kwụsịrị, nke mere na ndị nwere nsogbu iku ume na-adị mma, nke na-adịghị njọ ma ọlị, nri? 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị mere o ji ete mmiri apịtị?
Na ajuju, oburu n’Africa ewezuga ịhapụ ịmụ nwa, a ga-akụ obere osisi. Ọ ga-arụ ọrụ iji belata ntakịrị ntakịrị ihe arụ na okpomoku nke sitere na ebe ahụ? Kizas ndị NGO na-arịọkwa maka ụmụaka ndị amụrụ site na mgbukpọ nke mgbukpọ nke nne na nna ha, na-amata na ha agaghị enwe ike ịkwado ha, ha anaghị atụfu onwe ha ma ha nwere olile anya na ndị ọzọ ga-enyere ha aka. N'ime mkpọsa ndị a enweghị ike ịjụ osisi maka nwatakịrị ọ bụla? Enweela m ụmụaka na-emeghị ihe ọjọọ amụrụ site na anụ ọhịa nke naanị na-akpali x mmịrị ndị enwe, nke a kwadoro, ndị na-arịọ maka obere ihe anyị ga-akwadokwa osisi na ọnụ ahịa mmiri na ịghagharị Akello.
Ọ bụrụ na ahụghị m ihe Africa bụ, m ga-eche na ọ gaghị ekwe omume. Ma ee e, ebe ha na-amụ ụmụ. Biko nye ha ọgwụ mgbochi amụ nwa ebe ọ bụ na ha na-emeso ha dị ka ndị ohu, na-edina ha n'ike ma ọ bụ na ha dị ka anụmanụ na-eche naanị ịmụ nwa n'echeghị echiche banyere ibu ọrụ nke ịkpọbata ndị okike n'ụwa.
Enwere m olileanya na okwu a bụ egwuregwu